Dhijitari Welcome Screens - Nyore Multi Ratidza Dhijitari Signage Software
Dhijitari Screens yeHofisi Reception, Chiitiko Nzvimbo, Kugamuchira Vaeni
RODZA VAMWE VAKO
Ibva pasi petsoka rudyi ...
Kunyangwe iwe ukaona vatengi vako muhofisi yako, kana iwe uchigamuchira zviitiko zvikuru nezviuru zvevanhu, Easy Multi Display inobatsira iwe kugamuchira vashanyi vako nyore. Kunyangwe iwe uchida kuratidza kukwazisa kwakajairika, kana kugamuchirwa kwakagadzirirwa kune vako vashanyi vanokosha, unogona kuzviita na dhijitari yekugamuchira skrini muEMD.
Bata nesu nhasi kukurukura zvaunoda uye tanga kugadzira iyo inodziya kugamuchirwa mune yako indasitiri neinodhura uye yakapusa midhiya inoratidza software pamusika.
NEI TINOSHANDISA ZVINONYANYA KUTI RUDZIDZEI?
GADZIRA YEMUGWENGU INOPINDA ISIMBA
Vaenzi vanofarira kucherechedzwa. Vaitei vazive kuti vanokosheswa kubva pavanopinda pamusuwo nekugamuchirwa kwedhijitari.
VANYENGERI VAZIVA KUTI PAKUTI RUGADZI
Wakambopinda nzvimbo yekuratidzira kana horo yemusangano uye usina chokwadi kana iwe uri munzvimbo chaiyo? Dhijitari inovimbisa vashanyi vako kuti vakuwana iwe.
TAURA ZVAKAITIKA & MABASA
Mushure mekugamuchira vaenzi vako, iwe unogona kugovera ruzivo rwakakosha nezvebhizinesi rako kana chiitiko, senge mashejheni, mirayiridzo uye mamwe masevhisi pane ekupihwa.
ZVINOTAURWA NEVashandisi Vedu
Izvo zvine simba signage mune yedu yekurovedza muviri inozivisa uye inovimbisa varwere vedu. Izvi zvinoita kuti zvikwanise kuisa kumeso kusara kwemazita! Isu tinoratidzawo mazano anoshanda kune varwere vedu. Izvi zvinobatsira uye zvinoita kuti kumirira kunzwe kupfupika.
EMD ine mutengo unoregera kukwikwidza kwese! Mutengo wacho wakasarudzika uye unobatsira kwazvo uye hapana mari yakavanzika. Iyo EMD timu inoteerera uye inoteerera kune zvese zvandinoda.
Real Estate Maneja, Louvain-la-Neuve
PaUNICEF, tinoshandisa Easy Multi Display mukamuri yekumakombi, kuratidza zvatinoita kubatsira vana pasi rese. Ino ndiyo mukana wedu wekuratidza kuzvipira kwedu munzira ine simba - nemanzwiro.
YEMWE ISOLUTION COST
Tinozvidaidza nyore kuwanda kuratidza nekuti kusimuka nekumhanya ne
digital signage mhinduro nesu iri nyore.
Izvo zvaunoda kuti utange ...
Kombuta ine kadhi yemifananidzo - inokwanisa kushandisa akawanda kuratidza.
Sezvo akawanda eTV ezvaunoda iwe kurongwa kwako kwekuratidzira.
Nyore Multi Ratidza Software.
Hapana mitengo yakavanzika.
Hapana muripo wemwedzi.
Hapana Hardware yakaoma.
Imwe chete rezinesi isina ma addons kana kukwidziridzwa.
kunze. VAT *
1 Software Rezinesi
Ratidzwa pane 1 skrini inosvika kumamwe mana akasiyana emadhivhi
Cloud Software Kugadziridza kweMwedzi gumi nemaviri
Basic Local Network Kuwana 2X PC (inoda marezinesi maviri: PC Server uye PC Player)
Yepamberi Network Kupinda
Kudzidziswa Pamhepo Netsigiro
Yakasarudzika Software Branding
Yedu yakakurumbira sarudzo.
Ratidzwa pane matanhatu zvigadzirwa kusvika kumakumi maviri ezvipfumbamwe midhiya mativi
Yekutanga Yemunharaunda Network Kuwana 2x PC (inoda 2 marezinesi: PC Server uye PC Player)
Onsite Kuisirwa & Tsigiro
Yedu yakazara software uye masevhisi bundle.
Bata nesu mitengo yemitengo.
Mamwe masevhisi aripo kune edu ebhizinesi vatengi:
Kuwanikwa kure kwemaoko kutsigirwa
Bata nesu nhasi kuti tikurukure zvaunoda.
Zviri nyore kushandisa Interface
Vatengi vedu vanongoda kuti zviri nyore sei kuratidza midhiya yavo ne Easy Multi Display. Iyo software interface inokutungamira iwe kuburikidza nekugadziriswa kwekuita mudanho nedanho maitiro, kukubvunza iwe mibvunzo yese yakakodzera munzira. Haufanire kunge uri tech tech kuti usimuke uye uchimhanyisa ne Easy Multi Display.
Yakavakirwa pakuratidzira wizard
Iyo Easy Multi Display wizard inotungamira iwe kuburikidza neyakagadziriswa maitiro.
Sevha dzakawanda zvigadziridzo
Sevha akawanda ekushongedza ekushongedza uye uatakure zviri nyore.
Unoda rubatsiro rwekuwedzera zvishoma? Tarisa uone yedu Yekuvandudza Mitengo Chirongwa iyo inouya neawa 1 software software uye rutsigiro.
ONA ZVESE SHOWROOMS YETU
Unoda kuwona Easy Multi Display muchiita?
Bata nesu kuronga demo remahara, kana kugamuchira dzidzo kubva kune yedu technical technology.
Enda kune yedu showrooms peji >
Bata uye ubvunze mutengo ...
Bhuka rekuratidzira demo nhasi.
Ona izvo zvinogona kuitwa neKusiyanisa Zvakawanda...
Zadza fomu pazasi uye mumwe wechikwata chedu anenge achibatana munguva pfupi kuronga musangano.
Bhuka chikamu chekudzidziswa nhasi.
Tora zvakanyanya muRinowonekera Disti ...
Zadza fomu pazasi uye mumwe wechikwata chedu anenge achibatana kukurukura zvaunoda pakudzidziswa.